सुष्माले, खोलिन् श्वेताको खड्काको पोल !!! उनि भन्छिन मैले पनि एक चड्न त हान्न सक्थे नि तर मैले त्यसो गरिन (अन्तर्वार्ता भिडियो) – News Nepali Dainik
सुष्माले, खोलिन् श्वेताको खड्काको पोल !!! उनि भन्छिन मैले पनि एक चड्न त हान्न सक्थे नि तर मैले त्यसो गरिन (अन्तर्वार्ता भिडियो)
प्रकाशित मिति: शनिबार, माघ २४, २०७७ समय: २२:५२:१४
यहि कुरामा सुष्माले एक अन्तर्वार्ता खुलाएकी छिन । श्वेताले आफ्नो बहिनीलाई कुट्न लगाएको आरोप लगाउदै खड्का र उनको साथमा रहेका पति तथा बहिनीले कु’ट’पि’टसँगै आफूलाई तथानाम गा’ ली गरेको र अ’प’श’ब्द प्रयोग गरे । मैले पनि एक च ड्न त् ह न्न सक्थे नि तर मैले त्यसो गरिन भन्दै आईन मिडियामा हेर्नुहोस पुरा
Last Updated on: February 6th, 2021 at 10:54 pm